Wasiir ku xigeenka qurba joogta DDSI oo ka warbixiyay socdaal shaqo oo uu ku soo maray qaarka mid ah wadamada yurubta iyo Sidii Diiranayd ee Sedyo Sweden iyo Jaaliyaadku Ku Qaabileen. - Cakaara News
Wasiir ku xigeenka qurba joogta DDSI oo ka warbixiyay socdaal shaqo oo uu ku soo maray qaarka mid ah wadamada yurubta iyo Sidii Diiranayd ee Sedyo Sweden iyo Jaaliyaadku Ku Qaabileen.
Jigjiga(CN) Talaado Jan-27-2015. Todobaadkii tegay ayaa uu wasiir kuxigeenka Wakaalada Qurbajoogta DDSI socdaal ku tagay Sweden halkaasoo ay Jaaliyada iyo Ururka Dhalinyarada Sedyo-Sweden ay si heer sare ah ugu soo dhaweeyeen iyadoona Sedyo ay martiqaadyo kala duwan u sameeyeen sidoo kale jaaliyada kuna kala warqaateen Shirar aad muhiim ugu ahaa Dhinacyada.
Wasiir ku-xigeenka qurba joogta DDSI mudane bashiir maxamed cabdilaahi oo xafiiskiisa ugu warmayay qaarka mid ah warbaahinta deegaanka maanta ayaa ka warbixiyay socdaal shaqo oo uu ku soo maray wadanka swedan oo ka mid ah wadamada qaarada yurub.
Haddaba mar uu wariyaha shabakada wararka ee cakaaraNews waydiiyay wasiir ku xigeenka qurba joogta ujeedada socdaalkiisa ayaa waxa uu yidhi” XDSHSI waxa sanadihii ugu danbeeyay dajistay barnaamijyo siyaasadeed iyo istaraatajiyada horumarineed oo ku qotoma sii hirgalinta iyo sii xoojinta xidhiidhka wanaagsan ee wadamada dibada diiragalinta iyo wada shaqaynta qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku nool qaaradaha aduunka taasi 4 sano ee ugu danbeeyay laga soo hooyay guulo waawayn islamarkaana la soo afjaray hadhaagii dhaq dhaqaaqii UBBO ee qurbaha ka qawlaysan jiray”. Isaga oo masuulku hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi” Si aan barnaamijyadaasi u sii xoojino ayaa waxa uu socdaalyaygu ahaa in aan qurba joogta u dhalatay deegaanka ee ku dhaqan wadanka Sweden aan la yeesho kulamo lagu sii adkaynayo wada shaqaynta qurba joogta iyo xukuumada DDSI”.
Wuxuuna wasiir ku-xigeenku intii uu ku jiray socdaalkiisa shaqo ee wadanka Sweden uu kulamo balaadhan la yeeshay qurba joogta ku dhaqan wadankaasi gaar ahaan ururada dhalinyarada sida Sedyo-Sweden odayaasha haweenka iyo dhamaan bulshada qaybaheeda kale duwan .
waxaana ugu muhiimsanaa kulamada uu wasiirku layeeshay ee saacadaha badan qaatay kulan uu la qaatay ururka dhalinyarada SEDYO iyo odayaasha ku dhaqan caasimada labaad ee wadanka Sweden. kulamadaas ayaa lagu qorfaynayay sii dardargalinta wada shaqaynta xidhiidhka qurba joogta iyo xukuumada DDSI ayaa waxaa ugu horayntii ka hadlay gudoomiyaha ururka SEYDO Sweden Mudane Mohamed Hassan (Huways) isaga oo ka warbixiyay xaalada horumarineed ee jahliyada iyo qorshayaal lagu sii xoojinayo xidhiidhka iyo wada shaqaynta. S
ida uu noo sheegay masuulku waxa uu isaguna kulankaasi ka soo jeediyay khudbad dheer uu ku salaysan xaalada horumarineed ee uu marayo deegaanka iyo ka istaraatajiyadaha iyo himilooyinka horumarineed ee uu hiigsanayso xukuumadu iyo qorshayaasha ku wajahan dhinaca qurba joogta.
Ugu danbayntii kulankaasi ayaa laysla qaatay sidii looga midho dhalinlahaa meel marinta iyo hirgalinta hayaanka dhamaanba qorshyaasha ku qotoma iskaashiga iyo wada shaqaynta qurba joogta iyo xukuumada DDSI